Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pananahana ao amin'ny Reyncarnation of Phillis Wheatley | Maya Angelou - Fikarohana momba ny vatana teraka
Notohanana tamin'ny: Torolalana ho an'ny Fanahy na Fanahy Mitovy Ahtun ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw, 2006
Iray amin'ireo poeta ankafizin'i Oprah Winfrey ny Maya Angelou, izay naneho ny traikefa sy ny fanamby atrehan'ireo Afrikana-Amerikanina amin'ny asany.
Rehefa namaky aho Phillis Wheatley, izay nentina tany Boston ho andevo ary lasa poeta Afrikana-Amerikana voalohany teo amin'ny tantaran'i Etazonia, dia nanontany tena aho raha i Reynarnah dia i Revelarnas.
Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanaiky izany lalao izany i Ahtun Re.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Na dia voafetra ihany aza ny isan'ireo sarin'i Phillis Wheatley, amin'ny sary sasantsasany amin'ny Maya Angelou, dia hita fa misy fitoviana.
Innate Past Life Talent: Ny fanomezana an'i Phillis Wheatley ho an'ny prosa dia hita taratra amin'ny sanganasan'i Angelou.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Ao amin'ny bokiko Fiverenan'ny revolisionera ary ateraka indray, I Oprah Winfrey dia fantatra amin'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao indray James Wilson, izay nanasonia ny fanambarana ny fahaleovan-tena ary manam-pahaizana amin'ny literatiora Anglisy.
Phillis Wheatley dia niaina nandritra ny Revolisiona Amerikana; George Washington sy Thomas Paine dia mpankafy ny asany. Nanasa an'i Wheatley ho any an-tranony mihitsy aza i Washington taorian'ny nanoratany tononkalo momba azy.
Raha nipetraka tany Philadelphia i James Wilson, dia mety tsy nihaona tamin'ny olona mihitsy i Wheatley sy Wilson. Azo inoana fa nankasitraka ny tononkalony i Wilson, toy ny naneken'i Oprah ny fanenjehana an'i Angelou.